Mayelana - Alietc.com
Indawo yemakethe ye-Alietc B2B eletha ngempumelelo abathengi, abahlinzeki kanye nabakhiqizi abavela kuwo wonke umhlaba, ndawonye endaweni eyodwa enamandla.
I-Alietc yehlukile kwezinye izimakethe zedijithali ezaziwa njenge-Alibaba, i-Amazon, iTaobao, ikakhulukazi ngoba iveze ukushiyeka kwazo zonke lezo zinkundla futhi yagwema ukwenza amaphutha afanayo.
Inzuzo enkulu ye-Alietc ukuthi lokho akukhokhisi imali ekuthengeni, ngakho abathengi, abahlinzeki kanye nabakhiqizi bangakwazi ukugxila kulayini ongaphansi wangempela ngaphandle kokukhathazeka ngezinkokhelo zekhomishini.
Esikhundleni sokukhokhisa ikhomishini ekugcineni kwento ethengiswayo, u-Alietc ukhokhisa imali ebekiwe kwimikhiqizo yohlu noma ukubhalisa ukunikela ngemikhiqizo ethengiswayo.
Kunezizathu ezimbili zalokhu kwemali. Okokuqala, iqinisekisa ukuthi labo ababhala noma abanikelayo ngomkhiqizo bangempela ngokwenza ibhizinisi. Okwesibili, sifuna ukugcina izindleko zabasebenzisi beplatifomu zincane. Isibonelo, qhathanisa amaphakethe ethu entengo nalawo ama-Amazon athi, ngokwesilinganiso, akhokhise cishe u-13% wentengo yokuthengisa. Asifuni ukuthi imali ibe yinkinga noma ivimbele uma kukhulunywa ngokwenza amadili, sifuna ukuthi babe yisikhuthazo!
I-Alietc ayinikezi nje ipulatifomu futhi ikushiye, umsebenzisi, ukwenza wonke umsebenzi onzima. I-Alietc isebenza ngokugcwele ukuletha abantu abanjengawe epulatifomu, ngokusebenzisa kabanzi i-SEO kuyo yonke imikhiqizo efakwe kuhlu. I-Alietc iyiplatifomu eguquguqukayo futhi imane nje idonsela abasebenzisi abazinikele kakhulu ekwenzeni ibhizinisi elihle futhi basungule ubudlelwano besikhathi eside obuzuzisayo.
Siphinde sasho ukuthi lokhu kuyindawo yemakethe 'esebenzisana nayo'. Lokhu kusho ukuthi sakha umphakathi wamabhizinisi lapho ukuxhumana okuhle kuyisihluthulelo sempumelelo. Lokho kuxhumana akuhlanganisi ukwenza amadili amakhulu kuphela, kepha futhi kushiya impendulo kubona bonke ukuze babone. Isisusa sokwenza abakhiqizi nabaphakeli ukwakha idumela elisezingeni eliphezulu nokwethembeka, kuyilapho abathengi okuqondiwe kufanele kube ukuphetha ukusebenzelana ngokushesha nangokuphangisa, ngobuncane bokuphazamiseka.
Ungathola izinzuzo ezigcwele ze-Alietc lapha:
Noma ngabe uphatha izimpahla ezenziwe noma izinto zokwenziwa, ukujoyina imakethe yedijithali ye-Alietc kungaba kuhle ngebhizinisi kuphela. Noma ngabe uhweba ngezimpahla zabathengi ezinjengamathoyizi, okokugqoka noma ekhishini, noma uhweba ngezinto zokusetshenziswa ezifana ne-bauxite ne-potash, kuya ezindongeni nakupulasitiki.
Uma ufuna ukuthenga imikhiqizo, khona-ke nakanjani ufike endaweni efanele. I-Alietc iyi- "Cave ka-Aladdin" eqinisekile yemininingwane yonke engacatshangwa noma izinto ezingavuthiwe ongazicabanga, futhi eziningi okungenzeka awuzange wazi ukuthi zikhona.